FARITRA SOFIA : Toherin’ny mponina ao Ambalakirajy ny fitrandrahana kasain’ny Sinoa hatao
Vita ny herinandro teo fivoriana niarahan’ny solontenam-pokonolona sy ireo Sinoa hitrandraka niarahana tamin’ny Lehiben’ny Distrika Mandritsara, ny Tonia mpampanoa lalàna sy ny Zandary ary ny Polisy sy ny solontenan’ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny harena an-kibon’ny tany. 11 mai 2016
Araka ny voalazan’ny ao amin’ny solontenam-panjakana misahana ny harena an-kibon’ny tany dia mbola fahazoan-dalana hikaroka no nomena ireo Sinoa ireo, ary azony atao ny maka « échantillons » hatao fitiliana. Nanazava ireo lalàna mikasika ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara ihany koa izy ka isan’zany ny tsy maintsy handalovana amin’ny Distrika sy ny Kaominina ary ny fokontany sy ny fokonolona anaovana fampahafantarana mialoha ny hanao asa fikarohana. Namaly ny filohan’ny Sojabe fa « tsy nampahafantatra azy ireo, ireo Sinoa ka tsy magneky ny taniny hampidirana Sinoa izy ireo ».
« ’Zahay ty mbo mampianatra zaza ka rehefa mahay zanakay dia zahay no mitrandraka hariagnanay », hoy hatrany izy. Nentiny moa ireo ny taratasy nanangonana sonia manohitra ny fikarohana ataon’ireo Sinoa. « Asaivo mody any Sinoa reo fa aza alefa mipody any Ambalakirajy eky sao mivadika zavatra hafa, foano io fahazoan-dalana hanao fikarohana io. ‘Zahay efa tsy hiady hevitra hafa eky fa alifaso mody Sinoa reo », hoy hatrany ity filohan’ny sojabe ity.
Nanamafy ihany koa ny Tonia mpampanoa lalàna fa « tsy nifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany voalaza teo ny raha nataon’ireo Sinoa ireo ka tokony hajanona aloha izany mba tsy hisian’ny korontana ». « Efa fantatrareo ihany zahay aty Mandritsara rehefa misy tsy mahafaly ny fokonolona ka lasa zahay mpitandro filaminana ndray mahevoko », hoy ity Mpampanoa lalàna ity araka ny tatitra azo.
Niteny koa Dr Bartelemy avy any Andohajango : « are zeo io miatrik’olo vignitry ka mba tsy hankasaro-draha dia indao aloha Sinoa reo mody ». « Aza alefa maka entan-dreo tavela any Sinoa reo fa olo any vao mahita Sinoa dia efa ratsy be ny eritrertr’olo », hoy kosa ny fokonolona. Izay niteny nandritra ity fivoriana ity dia naniraka Sinoa reo nody aby sady nandrara azy ireo tsy himpody any Ambalakirajy heky na hangala entan-dreo sisa tavela. Niangavian’ny Lehiben’ny Distrika tsy himpody any amin’ny toerana anaovan’izy ireo fikarohana aloha izany ireo Sinoa. Mbola tsy fantatra ny ho tohin’ny raharaha fa fantatra fa isan’ny miaraka amin’ireo vahiny ireo mpitondra avy amin’ny Faritany Mahajanga eo amin’ny Fitondrana ankehitriny. Hatreto aloha dia tsy fantatra na misy ambadika politika na tsia ity resaka ity fa ho hita eo ihany ny tohiny.